လေကြောင်းလုပ်ငန်း၏တိုးတက်မှုသည်ပို့ကုန်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြရာတွင်Eskişehir OSB ဥက္ကPresident္ဌ Nadir Küpeliကပြောကြားရာတွင်ကမ္ဘာ့အရပ်ဘက်လေကြောင်းကဏ္ industry ၏တိုးတက်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ကုန်ဖြစ်သောEskişehirလုပ်ငန်း၏မျက်လုံးဖြစ်သောလေကြောင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ကာကွယ်ရေးနှင့် [ပို ... ]
ပြန်လည်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက် Countdown ကို Sabiha Gökçen Airport တွင်စတင်ခဲ့သည်
မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တူရကီနိုင်ငံတလွှားရှိ Covidien-19 အစ္စတန်ဘူလ် Sabiha Gokcen အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (OSH)၊ တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အနားယူပြီးနောက်အာဏာပိုင်များ၏ယာယီခွင့်ပြုချက်ရရန်ဆောင်ရွက်သည်။ [ပို ... ]
TCDD မှထုတ်ပြန်သောကြေငြာချက်တွင်ရထားလမ်းပေါ်တွင်မှုတ်လိမ်းပြီး ၁၀ ရက်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောလိပ်စာများကိုမချဉ်းကပ်သင့်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ နေ့စွဲ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့် 10 ဇွန်လ 14 မှ 1 မေလအကြားတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD), သမ္မတနိုင်ငံ, Konya-Akşehir, [ပို ... ]
မတ်လ ၂၁ ရက်မှ စ၍ coronavirus အစီအမံများကြောင့်ယာယီပိတ်ထားရသောဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်ပြည်သူ့စျေးကွက်များဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနနှင့်ကျန်းမာရေးရေးရာဌာနအဖွဲ့များသည်စစ်ဆေးမှုများကိုပိုမိုတင်းကျပ်ခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ [ပို ... ]
Ankara ရှိ Dolmuscu ကုန်သည်များအတွက်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအထောက်အကူ
Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဌာနသည် coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်အလုပ်များလျှော့ချထားသည့် dolmus ကုန်သည်များအားဆက်လက်ထောက်ပံ့နေသည်။ မီနီဘတ်စ်များ၌ပိုးသန့်ဆေးမှုဖြစ်စဉ်အပြင်၊ ရမadanွာန်ကြောင့်အစားအစာအထုပ်များကိုဖြန့်ဝေသည်။ [ပို ... ]
၂၄/၇ ကတ္တီပါတွင် ၂ ရက်ကြာညမထွက်ရအမိန့်ကိုသွန်းလုပ်ခဲ့သည်
Coronavirus ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနယ်ပယ်အတွင်းမှာ Ankara Metropolitan Municipality က ၂၄/၇ မှာ asphalt ကို ၂၄/၇ မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးမြို့တော်ရဲ့မြို့တော်မှာကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ Altındağမှ Chankaya၊ Etimesgut မှ Yenimahalle သို့မြို့၏ ၅၂ မှတ်အတိအကျရှိသည်။ [ပို ... ]
Eskişehirစက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥပဒေရေးရာဌာနသည် coronavirus ဖြစ်ပွားမှုများခံစားနေရသောသူများ၏တရားဝင်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ထားသည့်အစီရင်ခံစာတွင်အလုပ်ခွင်၌သို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်ပြင်ပရှိ coronavirus တွင်ဖမ်းမိခံရသူများ၏တရားဝင်အနေအထားကိုဖော်ပြထားသည်။ [ပို ... ]
Kayseri Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲအဖွဲ့၏စစ်ဆေးမှုများနှင့် coronavirus အစီအမံများလိုက်နာမှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှေးကွေးခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတက္ကစီယာဉ်မောင်းများကိုရဲများကဤအချိန်တွင်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ မြို့ပြမြူနီစီပယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲအဖွဲ့သည်တက္ကစီမှတ်တိုင်များကိုရပ်တန့်လိုက်သည် [ပို ... ]
İzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်သည် Konak ၏Gültepeခရိုင်ရှိKemeraltı Bazaar တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောHalkınBakkalı၏ဒုတိယဌာနခွဲကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ coronavirus အစီအမံများကြောင့်လူအနည်းငယ်သာပါ ၀ င်သည့်အဖွင့်ပွဲတွင်သမ္မတTunç Soyer က“ အခြေခံကျတယ် [ပို ... ]
ပြင်ပ၌ရုပ်ရှင်ရုံစိစစ်ခြင်းအပေါ်အထူးစိတ်ဝင်စားမှု! ၁၉ စက္ကန့်အတွင်းမှတ်တမ်းများကုန်ဆုံးသည်
သောကြာနေ့မေလ ၁၅ ရက်တွင် Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏ရုပ်ရှင်ရုံပြသမှုသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ “ Dealer Meeting” ရုပ်ရှင်ကိုခြောက်မှတ်ဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းပြသမည့်ပွဲတွင် ၁၉ စက္ကန့်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးဆုံးသည်။ အဖြစ်အပျက် [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအခမဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရသူများအတွက်ဂျဲန်ဒါမီရီနှင့်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်။ သမ္မတအမိန့်တော်သည်မေလ ၈ ရက်နေ့တွင်စတင်သက် ၀ င်ခဲ့သည်။ Gendarmerie နှင့် Coast တို့သည်တူရကီရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခမဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သောဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများနှင့်ဆက်သွယ်သည် [ပို ... ]
ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအကောက်ခွန်အစောင့်အဖွဲ့များကKapıkuleအကောက်ခွန်ဂိတ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်ဆင်ရေးတွင်တန်ဘိုး ၈ သန်း ၈၀၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံး ၅၇၃၀၀၀ ၇၅၀ ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ အကောက်ခွန်အာဏာတည်ခြင်းဆိုင်ရာအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန [ပို ... ]
တူရကီနိုင်ငံ၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနကောင်စီ (TUBITAK) ကိုအမြဲတမ်းလုပ်သား ၂ ဦး ကကြေငြာမည်။ ကြော်ငြာအတွက်လျှောက်ထားရန်“ www.bilgem.tubitak.gov.tr” တွင် Job Application System တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ (လျှောက်လွှာအတွက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင် "ဗိုင်းရပ်စ်ရှာဖွေသူများ" သည်အနာရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုရပ်တန့်ရန်အတူတကွစုရုံးလာကြခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျပူးပေါင်းအဖွဲ့ကို Global Virome Project ဟုခေါ်သည် [ပို ... ]
BTS: 'Sirkeci ဆိပ်ကမ်းPortရိယာကိုYeşilayသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့တိတ်ဆိတ်စွာနေမည်မဟုတ်'
ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ထမ်းများသမဂ္ဂ (BTS) ကဆိပ်ကမ်းကိုရောက်ရှိရန်နှင့် Sirkeci ဆိပ်ကမ်းinရိယာတွင်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားသောandရိယာများနှင့်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားသောreachရိယာများသို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများသည် protocol တစ်ခုအတွက်အပြီးသတ်ပြင်ဆင်မှုအဆင့်သို့ရောက်ပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။ BTS ဗဟိုအမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ [ပို ... ]
နိုင်ငံခြား Hit သီချင်းများ? 2019-2020 နိုင်ငံခြားသီချင်းများ?
နိုင်ငံခြားထိခိုက်သီချင်းများထဲတွင်အတော်လေးအောင်မြင်သောသီချင်းများရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသီချင်းများ, သင်အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိလျှင်ပင်, အလွန်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ရွေ့လျားဂီတရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့အများစုသည်နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်သည် [ပို ... ]
irakir Zümreသည်သူ၏အမှတ်တရများကိုအသေးစိတ်ရေးသားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူရေးဖို့အချိန်မရခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ irakir Zümreတွင်ကျိုးနွံသောစိတ်ထားရှိသည်။ သူသည်သူ၏ဇာတိမြေ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်Atatürkနှင့်သူ၏ရင်းနှီးမှုအကြောင်းမပြောခဲ့ပါ။ [ပို ... ]
သူသည် ၁၉၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင်Diyarbakırရှိ Lice ခရိုင်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလေးအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိခင်ဘက်ခြမ်းသည်ပင်လယ်နက်မှဖြစ်ပြီးဖခင်ဘက်သည်ဘီယက်ပါဇာတွင်ပထမဆုံးအခြေချခဲ့သောကယားလူမျိုးစု၏မိသားစုအပေါ်တွင်တည်သည်။ သူ၏ဖခင်Asım bey ကို ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင်Diyarbakırတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Galata မျှော်စင်မှ Imamoglu မှယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီး Ersoy ထံပေးစာ
BBB ဥက္ကrem္ဌ Ekrem amomamoğluသည်စည်ပင်သာယာနယ်မြေဖြစ်သော Galata Tower ကိုယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီး Mehmet Nuri Ersoy သို့သမ္မတအီမာမိုလူကစာရေးသည်မှာထင်ရှားသည် [ပို ... ]
အေဂျီလူငယ်စီးပွားရေးအသင်းမှEGİADသည် Covid19 ကူးစက်ရောဂါ၏စီးပွားရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်အကဲဖြတ်ရန်“ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရာ၌မက်ခရိုစီးပွားရေးအလားအလာ” ဟူသောဝဘ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ EGİADအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး [ပို ... ]
Covit-19 အဖြစ်အပျက်များပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်မတ်လကုန်တွင်လမ်းပေါ်ထွက်သောလူ ဦး ရေမှာလျော့နည်းသွားသည်။ သို့သော်Aprilပြီလနောက်ဆုံးအပတ်တွင်မတ်လကုန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃၀.၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှလူ ဦး ရေရာခိုင်နှုန်း [ပို ... ]
Evler ရထားဘူတာ ၄၂ ဘယ်တော့ရပ်မှာလဲ။
ဆင်ခြေဖုံးရထားကိုအသုံးပြုမည့် Arifiye နှင့် Pendik အကြားလိုင်းသစ်ရှိ Izmit 42 Evler ဘူတာတွင်အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသည်။ ဘူတာရုံကိုသြဂုတ်လတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်ရသည် Özgür Kocaeli မှ Muharrem Şenol၏သတင်းအရ; “ Izmit 42 Evler inရိယာရှိဆင်ခြေဖုံးရထား [ပို ... ]
မြို့တစ်မြို့လုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကြိုးပမ်းမှုများအရ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Izmit Büyük Seka ဥမင်ပေါ်တွင် Orduevi ရှေ့ရှိလမ်းဆုံ၌ကျောက်ခင်းခင်းထားသည်။ သိပ္ပံ [ပို ... ]
ဆိုင်းငံ့ငွေတောင်းခံလွှာလျှောက်လွှာများ mirzmir တွင်စတင်ခဲ့သည်
"ဆိုင်းငံ့ငွေတောင်းခံလွှာ" လျှောက်လွှာအတွက်လျှောက်လွှာများကိုစတင်လက်ခံရရှိပြီး၎င်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့နောက်မှ Izmir တွင်လည်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသောစာရင်းပေးသွင်းသူများသည် Biz İzmirဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ၄ င်းတို့၏ရေငွေတောင်းခံလွှာများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ [ပို ... ]